Welcome to Aayaha Nolosha » GABAR NAF BADBAADISAY OO GUUR IYO JACAYL LOOGU ABAAL-GUDAY
GABAR NAF BADBAADISAY OO GUUR IYO JACAYL LOOGU ABAAL-GUDAY
February 23, 2019 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Wiil iyo gabadh ilma adeer ahaa oo aanay horey wax xiriir ah uga dhexeyn, damac guurna aanay iska lahayn ayaa arrin filanwaa ah oo ay gabadha ku dhaqaaqday waxa uu sababay guur iyo jacayl lamaane aan horey loo arag.
Wiilka ayaa xanuunsaday waxaana la dhigay Isbataal, waxayna dhakhaatiirtu sheegeen in uu ka xanuunsan yahay Keli, loona baahan yahay qof kelli ugu deeqa.
Ilaa Lix qofood oo walaalihii iyo ehelkiisa ug dhow dhow ayaa mid waliba si gaar ah isugu dayay inuu kelidiisa ugu deeqo wiilkaa si loo badbaadiyo, balse baaritaan uu Lixdaasi ruux ku sameeyay dhakhtarka ayuu sheegay inaysan suuragal ahayn in kellyahooda lagu badbaadiyo wiilka xagga is lahaanshiyaha oo is diidaya awgeed.
Arrinka oo quus laga taagan yahay wiilkuna uu naf ka sabray ayaa gabadha ay ilmo adeerka yihiin oo arrinka maqashay ayaa iyadoon cidna la tashan waxay si lama filaan ah u tagtay dhakhtarka, markii uu baaritaan ku sameeyayna wuxuu u sheegay inay is leeyihiin Kellideeda iyo middiisa, waxayna dalbatay in iyada looga saaro.
Gabadhaas oo wiilka u hurtay mid ka mid ah kelliyaheeda si uu u sii noolaado, iyadoo naxariis walaalnnimo u samaysay ayaa waxa ay arrintaasi wiilkii ku abuurtay jacayl baaxad weyn oo aakhirkii mira dhalay, markii uu soo caafimaadayna waxay noqdeen lammaane si aad ah isugu kalsoon, aakhirkiina waxay noqotay xaaskiisa oo uu aad u jecel yahay.
Abwaan lagu magacaabo Cawaale Ismaaciil Saleebaan oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa wiilka la sheekeystay wuxuuna ka sameeyay gabay uu ku cabbiray sheeko jacayl oo nooceeda oo kale ay ku yar tahay bulshada Soomaalida.
Gabaygan ayuu abwaanku ugu magac daray “Naf jacayl maloo huray” wuxuuna gabaygani abwaanku kaga warramay sida ay u soo jiidatay sheekada gabadh ina adeerkeed aanu wax xiriir ah kala dhexeyn ugu deeqday killideeda, kaddibna taasi ay sababtay inay is jeclaadaan oo aakhirkiina is guursadaan.
Abwaan Cawaale waxa uu sheegay in uusan aqoon kale u lahayn lammaanahan, balse warkooda uu uu kala socday baraha bulshada oo aad looga hadal hayay, kaddib markii uu maansada sameeyayna uu la sheekaystay wiilka ay dhacdadani qusayso.
Markii aan la sheekaystay wiilku waxa uu ii sheegay inuu xilligaas naf oo dhan ka quustay iyadoo markaas tirada dadka ku deeqayay killida ay gaarayeen ilaa Lix qofood, baaritaan marka lagu sameeyayna ay is yeelan waayeen kellidiisa iyo kuwooda.
Gabadha oo lagu magacaabo Sagal ayaa go’aansatay inay dhakhtarka tagto oo killideeda ugu deeqdo, baaritaankiina wuxuu noqday mid sax ah oo wiilku uu qaadan karo.
Markii uu wiilkii soo bogsooday, xaaladdiisa caafimaadna ay caadi noqotay ayaa waxa uu ka fikiray sidii uu ugu mahadcelin lahaa gabadha, waxa uuna go’aansaday inuu nolosha la qaybsado, maadaama ay laba killiyood oo kaliya ay ku wada nool yihiin.
Abwaanka waxa uu yiri markii aan sheekada maqlay waxaan is iri haddii aysan dadkani Soomaali ahaan lahayn qisadooda buugaag ayaa laga qori lahaa ama filimaan ayaa laga samayn lahaa, markaas ayaan go’aansaday inaan gabay ka samayn karo oo aan taariikheyn karo.
Maansada uu abwaanka ka sameeyey sheekadan ayaa waxa lagu soo bandhigay magaalada Hargaysa, xarun lagu martiqaaday 29 lammaane, boqolaal kale oo wiilal iyo gabdho ah, waxayna soo jiidatay dhammaan dadkii maqlay maansadan oo noqotay mid taariikhi ah.